Saturday February 29, 2020 - 11:33:17 in Wararka by Xarunta Dhexe
Dagaalkani oo udhaxeeyay ciidamo daacad u ah hogaamiyaha Ahlusunah Waljamaac isla markaana ah madaxi xukuumada Galmudug iyo cidiamo ka socda dhanka dowlada federaalka oo garab xoogan siinaya madaxweynaha Galmudug ee mudane Qoor Qoor.'
Dagaalkaan oo sababay in gabi ahaan hakad ka yimaado dhaq dhaqaaqi ganacsi iyo bulshada ee magaalada ayaa waxa ugu dambeenti laga gaaray is afgarad
Waxana dadaalo xoogan ee waxgaradka deegaanka ee ka dhax wadeen dhinacyada is hayay ee ku guuleesteen in arintaa lagu soo afjaro wanaag iyo walaalnimo taasi oo maanta noqotay warki ugu farxada badnaa ee reer Galmudug iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee maqlaaan.
Hogaanka culimada ahlusunah ee gobolka Galgaduud ayaa qaatay waan waantii iyagoo utanaasulay shacabka iyo sharafka umada soomaaliyeed oo had iyo jeer mas'uuliyad ka saarantahay, taasi oo sidoo kale ah astaamaha iyo dhaxalka ee culimadaani lagu yaqaano.
Hogaanka culimada Ahlsunah oo warsaxaafadeed goor dhow ku qabtay magaalada Dhuusamareey ayaa cadeeyay in shacabka utanaasuleen
Sheekh Axmed Shaakir oo ahaa hogaanka Ahlusunay ayaa markale tibaaxay in Ahlsunah ee mar walba utaagantaha difaaca caqiidada iyo shacabka Soomaaliyeed marnabana hadafkooda iyo tartiibtooda eesan eheen wax ku noqoshada dhiiga shacabka balse taas cagsigeeda ee diyaar uyihiin iney ushahiidaan difaaca dalka iyo dadka iyo diinta umada muslimka.
Goobta oo shiarka jara'id kuqabbtay mudane Sheekh Axmed Shaakir ayaa sidoo kale waxa fadhiyay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dhalinta Ahlusunah Sheekh Ashcari oo saraakiil sar sare oo katirsan hogaanka sare ee ciidanka dowlada Soomaaliya oo hore u ahaayeen ciidinki Ahlusunah Wlajaamaac kuwaasi oo la wareegay guud ahaan amaanka magaalada.
31/12/2015 - 03:10:20
Culuma'udiinka Ahlusunah oo Muqdisho kaga dhawaaqay Golaha guud ee Culuma'udiinka Soomaaliyeed (Sawiro)
12/09/2015 - 01:30:07
31/07/2015 - 18:41:51
Sarkaal katirsanaa Ahlusunah oo Geddo Isku dilay
20/02/2014 - 13:29:16
02/04/2013 - 17:28:31
03/03/2013 - 11:34:38
08/09/2012 - 12:09:41
Ahlusunah oo amar kasoo saartay iibinta raashinka Bisil
21/07/2012 - 13:53:33
25/06/2012 - 18:01:02
06/06/2012 - 10:15:33